Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Shirkad u balan qaaday in Lacag la'aan ku raaci doono Diyaaadooda wiil yar oo ku dhax dhashay
August 19 2017 00:58:59
Shirkad u balan qaaday in Lacag la'aan ku raaci doono Diyaaadooda wiil yar oo ku dhax dhashay
Shirkadda Diyaaradaha Jet Airways oo laga leeyahay dalka Hindiya ayaa balan qaad cajiib ah u sameysay wiil yar oo ku dhax dhashay Diyaaradooda oo kasoo duushay Boqortooyada Sacuudiga kuna soo jeeday dalka Hindiya.
Qof kamid ahaa rakaabkii diyaarada saarna una tababarnaa kalkaalisinimo iyo Shaqaalaha Diyaarada ayaa caawiyay hooyo fool qabatay xili ay diyaarada dhulka ka sarraysay 10,688 mitir, waxaana lagu guuleestay in hooyadaasi si caadi ah cunuga looga dhaliyo.
Diyaaraddan oo nooceedu yahay Boeing 737 ayaa ka dagtay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya, waxaana hooyada umusha ah iyo cunugeeda markaas kadib la geeyay xarun caafimaad halkaas oo lagu daweeyay , waxaana la sheegay in labaduba ay hada xaaladooda fiican tahay.
Maamulka Shirkada Diyaaradaha Jet Airways ayaa sheegay in ay tani tahay markii ugu horeesay oo diyaaradooda cunug lagu dhax dhalo, waxa ayna u balan qaadeen cunugan diyaaradooda ku dhashay in di lacag la'aan ku raaci doono inta uu nool yahay diyaaradahooda.
Inta badan Diyaaradaha ayaa ogolaada in ay qaadaan dumarka uurka leh inta ka horaysa toddobaadka 36aad ee uurka, laakiin waxay u baahan yihiin waraaq uu soo saxiixay dhakhtar oo la qoray inta ka horaysa toddobaadka 28aad ee uurka, taas oo ay ku caddahay maalinta la rajaynayo in ay hooyadu dhallidoonto.